शैक्षिक सुधार गर्दै भरतपुर महानगर – Click Khabar
शैक्षिक सुधार गर्दै भरतपुर महानगर
बिहिबार, पौष २२, २०७८ | ९:००:२७ |
चितवनः शैक्षिक सुधारमा भरतपुर महानगरपालिकाले उल्लेख्य प्रगति हाँशिल गरेको छ । देशका अन्य पालिकाहरुमा हुन नसकेका नमुना योग्य काम महानगरले गर्न सफल भएको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले शिक्षाको बिकासमा भरतपुर महानगर अग्रणी रहेको बताउनुभयो । उहाँको भनाईमा महानगरमा अटिजम बिद्यालयको स्थापना, शिक्षक दरवन्दि सृजना गरि युवा स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन, खुल्ला आवेदनबाट पूर्ण छात्रबृत्ति प्रदान जस्ता कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिकाले मात्र गरेको छ ।
यी कार्यहरु अन्य पालिकाका लागि सिको गर्ने कार्य भएको उहाँको भनाई छ । भरतपुर महानगरले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको १३ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको छ । संघिय सरकारले १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा वजेट छुट्याएको छ । प्रमुख दाहालले भन्नुभयो “हामीले शिक्षामा दिएको प्राथमिकताका कारण नतिजा पाउन सकेका छौ ।” अन्य पालिकाले गर्न नसकेका काम भरतपुरले गर्न सकेको उहाँको भनाई छ । भरतपुर महानगरपालिकाले उच्च शिक्षामा प्राबिधिक बिषय अध्ययन् गर्नेहरुका लागि बार्षिक रु १० हजार छात्रबृत्ति उपलव्ध गराउँन सुरु गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको न्यूनतालाई परिपूर्ति गर्ने उद्धेश्यले भरतपुर महाननगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट रु ६५ लाख अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद पौडेलले ३० जना युवा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बताउनुभयो । सामुदायिक बिद्यालयहरुमा शिक्षक अभाव हुन नदिनका लागि यस कार्यक्रम राखिएको उहाँको भनाई छ ।
यस संगै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्यामा करिब ६ हजार वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वि. सं. २०७५ मा ५६ दशमलब ४७ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिक सत्र वि. सं.२०७७ मा ५ दशमलब ५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेख्य प्रगति भएको पौडेलको भनाई छ । कुल साक्षरता दर गुणस्तरमा ९८ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । बिभिन्न स्थानमा नमुना विद्यालयहरू स्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षकको प्रविधि उपयोगको क्षमता विकास गर्न आइसिटि तालिम सञ्चालन गरिएको छ । सबै आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरी शिक्षासँग सिकाइ जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बिगत ४ वर्ष ६ महिनामा ‘हाम्रो गौरव हाम्रो भरतपुर’ विषयको कक्षा १ देखि ८ को स्थानीय पाठयक्रम निर्माण गरी लागु गरिएको छ ।” शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय विकासको कार्य कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संस्थागत विद्यालयहरूको साझेदारीमा कक्षा ११ का २३९ जना विद्यार्थीहरूलाई मेरिट बेसमा आधारीत पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरीएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यो नेपालमानै पहिलो कार्य हो ।”
लैङ्गिक हिंसारहित बिद्यालय वनाउनका लागि सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा एक जना महिला शिक्षिकालाई लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षक तोकीएको उहाँको भनाई छ । उनिहरुलाई लैंङ्गीक हिंसा सम्बन्धि अभिमुखिकरण समेत दिई सकिएको छ । भरतपुर बालमन्दिरमा अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना गरी अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गरिएको छ । सामुदायिक बिद्यालयमा ५ वटा स्कुल वस उपलव्ध गराईएको र अहिले पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
महानगरपालिका भित्र सामुदायिक १ सय २३ वटा र संस्थागत ९७ वटा रहेका छन् । ती बिद्यालयमा ८६ हजार भन्दा वढि बिद्यार्थी अध्ययनरत छन् । महानगरपालिका भित्र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय, दुईवटा मेडीकल कलेज संगै अन्य प्राबिधिक कलेजहरु संगै बिभिन्न बिश्वबिद्यालयका आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसहरु र नीजि क्याम्पसहरु रहेका छन् । चितवन सहित छिमेकी जिल्लाबाट यहाँका स्कुल र कलेजहरुमा बिद्यार्थी पढ्न आउने गर्दछन् ।